Saddex Ciyaartoy Oo Man United Ah Ayaa U Dhibtoonaya Imaatinkii Alexis Sanchez Waxayna Dhibta Ugu Badani Ku Dhacday Marcus Rashford. – GOOL24.NET
Saddex Ciyaartoy Oo Man United Ah Ayaa U Dhibtoonaya Imaatinkii Alexis Sanchez Waxayna Dhibta Ugu Badani Ku Dhacday Marcus Rashford.
Tan iyo markii uu Alexis Sanchez ku soo biiray Manchester United waxaa jirtay dood ah in uu abuuray khilaaf qolka labiska Manchester United ah iyada oo ay jireen sababo kala duwan. In Manchester United ay Sanchez ka dhigtay xidiga abid ugu mushaarka badan Premier league ayaan si fiican uga dhaadhicin ciyaartoyda muhiimka ka ah Red Devils.
Laakiin markale waxay xaaladu sii xumaatay markii imaatinkii Alexis Sanchez uu si toos ah saamayn ugu yeeshay xidigo ka tirsan Manchester United isla markaana loo arkayay kuwo mustaqablka wax wayn ku soo kordhin kara kooxda isla markaana intii aanu iman Old Trafford iyagu booska u tartamayay.
Khabiirka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa sheegay in imaatinkii Alexis Sanchez ee Manchester United uu dhibaato wayn u gaystay saddexda xidig ee kala ah Paul Pogba, Anthony Martial iyo Marcus Rashford laakiin waxa uu xusay in Rashford uu yahay kan dhibata ugu wayn la kulmay.
Charlie Nicholas oo ka hadlayay kulanka caawa ee Manchester United ay la ciyaari doonto Sevilla ayuu sheegay in United ay soo bixi doonto caawa isla markaana ay 2-0 ku garaaci doonto Sevllla balse waxa uu hoosta ka xariiqay saamaynta xun ee uu Sanchez ku yeeshay xidigahan.
Charlie Nicholas oo marka hore ka hadlaya kulanka Sevilla iyo Man United ayaa yidhi: “Anigu waxaan filayaa in United ay soo bixi doonto, sababtoo ah waxa ugu muhiimsani waa in kooxdani tahay tii sanado badan ugu liidatay Sevilla”.
Intaa kadib Charlie Nicholas ayaa xusay in haddii xataa Pogba uu taam yahay aanu kulankan ku soo bilawdeen maadaama oo uu Sanchez u dhibtoonayo wuxuuna yidhi: “Xataa haddii uu Paul pogba taam ahaan lahaa, anigu maan fileen in uu kooxda United ku jiri lahaa maadaama oo uu la dhibtoonayo wareerka imaatinkii Alexis Sanchez uu kooxda u keenay”.
Charlie Nicholas oo ka hadlaya Martial iyo Rashford iyo saamaynta xun ee uu imaatinkii Alexis Sanchez ku yeeshay ayaa yidhi: “Anthony Martial ayaa sidoo kale soo dhibtooday laakiin da’yarka hibadooda ugu wayn ah ee Marcus Rashfrod ayaa ah kan inta ugu badan dhibaatooday. Waxa uu yimid kulan wayn shaqadii ayanu qabtay, laakiin anigu la yaabi maayo haddii uu kaydka ku soo laabto”.
Ugu danbayn Charlie Nicholas ayaa ka sii hadlay Rashfrod wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan Rashford ku taageeri lahaa sharad 14/1 ah ee Sky Bet in uu laba gool oo kale dhaliyo laakiin waxa aanan ogayn ayaa ah haddii uu ciyaari doono. Anigu ma garanayo haddii uu Sanchez u qalmo in uu shaxda ku jiro laakiin haddii uu ku jiro waxaa hubaal ah in ayna noqon qiimaha Rashford”.